पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुअघि देखिन्छ यस्तो संकेत - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeजीवनशैलीपाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुअघि देखिन्छ यस्तो संकेत
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुअघि देखिन्छ यस्तो संकेत
छातीको क्यान्सरपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी महिलाहरु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेको तथ्यांक छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर गर्भाशयको तल्लो भागमा हुनेगर्छ । अर्थात गर्भाशय र योनीलाई जोड्ने भागमा । यस प्रकारको क्यान्सरको सुरुवात महिलामा ३५–४० बर्षको उमेरपछि हुन्छ । विशेषगरी महिलाको मासिक स्राव अनियमित हुन्छ र योनीबाट धेरै रगत स्राव हुन्छ ।
यो पाठेघरको मुखमा फैलिएर कलेजो, ब्लाडर, योनी, फोक्सो र मिर्गौलासम्म फैलन्छ । यसले शरीरका भित्री अंगहरुमा नराम्ररी प्रभावित बनाउँछ ।
जबकि पाठेघरको मुखको क्यान्सर क्रमस विस्तारै विस्तारै बढ्ने भएकाले कतिपयले यसको सुरुवाती लक्षण थाहा पाउँदैनन् । जब समस्या गंभिर बन्छ, तबमात्र यो क्यान्सर फैलिएको थाहा हुन्छ । यदि सुरुवाती चरणमै यसको लक्षण थाहा भयो भने उपचार संभव र सहज हुन्छ । त्यसैले शरीरमा देखिने केही यस्ता संकेतपछि सर्तक हुनुपर्छ ।
सामान्यत पाठेघरको मुखको क्यान्सर ३५ देखि ४० बर्षको उमेरपछि हुनेगर्छ । यद्यपि यसको संकेतबाट रोग पहिचान गर्न सकिन्छ । यदि शारीरिक सम्बन्ध र रजनोवृत्तिपछि पनि धेरै रक्तश्राव भयो, प्रजनन अंगमा दुखाई महसुष भयो भने यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ ।
अक्सर महिलाले सेतो पानी बग्नु अर्थात वाइट डिस्चार्ज जस्ता समस्यालाई आम समस्या मानेर नजरअन्दाज गर्छन्, जो पछि गएर निकै खतरनाक सावित हुनसक्छ । यस्तो समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन किनभने यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ ।
मासिक धर्ममा सामान्यत महिलाको कोखमा दुखाई अनुभव हुँदैन । तर, अचानक हल्का वा तिब्र दुखाई महसुष हुन थालेमा त्यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ ।
यद्यपि यी लक्षणहरु अन्य अवस्थामा पनि देखिन सक्छ, क्यन्सर नै हो भन्ने हुन्न । त्यसैले यसमध्ये कुनै समस्या भएमा चिकित्सकको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ ।
पाठेघरमा हुने क्यान्सर विशेषगरी ट्युमरका कारण हुन्छ । पाठेघरमा कोषिकाहरुको उत्पादन आवश्यक्ता भन्दा बढी भएमा ट्युमर बन्ने गर्छ । त्यस्ता ट्युमर सबै क्यान्सर नै हुन्छ भन्ने छैन ।
यस्ता ट्युमर, व्यक्ति तथा उमेर अनुसार पनि फरक हुन्छ । त्यस्तै, किशोरावस्थामा हुने ट्युमर, चालीस वर्ष कटेपछि हुने ट्युमर तथा महिनावारी सुक्ने अवस्थामा हुने ट्युमर पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुने गर्दछ । त्यस्तै, यस्ता ट्यूमर पाटेघरमा मात्र नभई डिम्बासय तथा नलीको छेउमा पनि हुन सक्छ ।
महिलाहरुको पाठेघरमा हुने ट्युमर पनि फरक हुने गर्दछ । चालीस वर्ष कटिसकेका महिलाहरुको पाठेघरमा देखिने ट्युमर दुई किसिमको हुन्छ , फाइब्रोइड र एडिनोमायोसिस ।
महिलाहरुको पाठेघरमा हुने अर्को ट्युमर भनेको डिम्बासयको ट्युमर हो । यस्ता ट्युमर व्यक्ति अनुसार फरक हुने गर्दछ । किशोरीहरुमा डिम्बासयमा मात्र नभई नलीको छेउमा समेत पेराफ्रिम्बल नामक ट्युमर आउन सक्दछ ।
अहिलेसम्म यसको ठोस जवाफ छैन । यद्यपी, वंशाणुगत कारण तथा महिलाहरुको शरीरमा इस्ट्रोजन हर्मोनको उत्पादन आवश्यक्ता भन्दा बढी भएमा पनि पाठेघरमा ट्युमर पलाउन सक्छ ।
त्यस्तै, धुमपान तथा मदिरापानले पनि शरीरमा विभिन्न किसिमको क्यान्सर गराउन सक्ने हुदाँ यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पाठेघरको मुखको क्यान्सरसँग पनि हुने गर्छ ।
कसरी उपचार गरिन्छ ?
सामान्यतया, एडिनोमायोसिस नामक ट्युमर औषधिबाट निको पार्न सकिन्छ । त्यस्तै, पाठेघरमा मेरिना राखेर पनि यस्ता ट्युमरको उपचार गर्न सकिन्छ । फाइब्रोसिस ट्युमर भएमा शल्यक्रिया गर्नु पर्दछ ।
कुनै पनि महिलाको पाठेघरमा जटिल किसिमको ट्युमर देखिएमा त्यसको उपचार गर्नु भनेको उक्त ट्युमर निकाल्नु नै हो । पाठेघरको ट्युमर देखिएमो पेट चिरेर शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ ।
त्यसबाहेक, पेटमा स–साना प्वाल पारेर गरिने ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी अर्को प्रविधि हो ।
Previous articleकिन हुन्छ दम्पतीबीच बारम्बार झगडा ?
Next articleसबै बैंकले घटाए बेस रेट, ऋणको ब्याजदर सस्तियो
डाक्टरको सुझाव- श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट बच्न शरीर न्यानो बनाइराखौं
जाडोयाम मन पर्छ, पहिरन गर्मीको : मेलिना मैनाली